अर्थ – Ganatantra Online
घोराहीमा फेरी अर्को कृषि हाट बजार संचालनमा
दाङ,१३ साउन | घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा कृषि हाटबजार संचालनमा आएको छ । संघिय सरकार र घोराही उपमहानगरपालिकाको लगानीमा घोराही १५ को अमृत टोलमा निर्माण गरिएको कृषि हाटबजारको सोमवार उद्घाटन गरिएको हो । बजारमा निर्माण भएका टहरा एवं भवनको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेयले...
जीतसागर जी.एम. तुलसीपुर, १२ साउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ गणेशपुरकी जयमा बुढा र धादिङको साविक नौविसे–५ हाल गणेशपुरमा व्यवसाय गर्दै आएकी सपना श्रेष्ठ तामाङ चिनजान भएको लामो समय भएको छैन् तर छाटो अवधिमै चिनजानमा विश्वास बढ्दै गएपछि तामाङले शुरुमा ग्याँसको कारोबारमा समस्या परेको भन्दै बुढासंग ३० हजार लिइन् र केहि समयपछि भनेको समयमा...
समयमै कर नबुझाउने दाङका ६१ फर्म तथा व्यक्ति कारवाहीमा
तुलसीपुर, १२ साउन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरले वितेको आर्थिक वर्षमा समयमै कर दाखिला नगर्ने ६१ फर्म तथा व्यक्तिलाई कारवाही गरेको छ । कार्यालय प्रमुख लिलाप्रसाद शर्माका अनुसार समयमै कर दाखिला नगर्ने ६१ फर्म तथा व्यक्ति कारवाहीमा परेका हुन् । समयमै कर दाखिला नगर्ने फर्म तथा व्यक्तिलाई शुन्य सहनशीलतामा आक्रामक रुपमा कारवाही...
ड्याटसन र निसान गाडीको प्रोफेसनल भेट
दाङ, साउन ११ । गत बैशाखमा विधिबत रुपमा उद्घाटन भएर दाङको घोराहीबाट निसान र ड्याट्सन गाडीहरुको कारोबार गर्दै आएको एन.एल. मोटोकर्पले व्यवसायीक भेटघाट कार्यक्रम गरेको छ । जापानिज कम्पनीको निसान र ड्याट्सनका ९ वटा मोडलका गाडीहरु दाङको बजारमा भित्रिएको एनएल मोटोकर्पका प्रमुख सुर्दशन गिरीले बताउनुभयो । (more…)...
घोराहीको मुख्य सडकको काम अधुरै
दाङ, साउन ११। दाङ घोराहीको मुख्यचोकदेखि पश्चिमतिरको ३० मिटर सडक मध्य आधा सडक मात्र पिच भएको छ । आधा सडक ग्राभेलमै छाडिएको छ । ग्राभेल गरिएको सडकमा खाडल परेका छन् । वर्षातमा पानी खाडलमा जम्मा हुदाँ घोराहीको मुख्यचोकमै हिडडुल गर्न समस्या भएको छ । घोराहीको तुलसीपुरचोक देखि पश्चिमतिरको करिव सय...
पचास प्रतिशत अनुदानमा पावर ट्रिलर वितरण
दाङ, साउन ११। राजपुुर स्थित सुुर्योदय कृषक बहुुउदेश्यिय सहकारी संस्थाको समन्वयमा नेपाल सरकार प्रदेश नं. ५ ले उपलब्ध गराएका १४ थान पावर ट्रिलरहरु एक कार्यक्रमका बीच बिहिवार वितरण गरिएको छ । (more…)...
जग्गा कारोबार घट्यो : आठ प्रतिशतले राजश्वमा कमि
जीतसागर जी.एम./ तुलसीपुर, ११ साउन/ सरकारले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि जग्गा कारोबारमा कमि आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जथाभावि आवासमा परिणत हुन थालेसंगै जग्गा किनबेचमा कमि आएको हो । जग्गाको कारबारी कमि भएपछि राजश्वमा पनि कमि आउन थालेको छ । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा बितेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६...
तुलसीपुर, ११ साउन | दाङको तुलसीपुरमा करिब ३ करोडको लागतमा तुलसी डेरी उद्योग संचालन हुने भएको छ । हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पाँचौ परियोजनाको रुपमा तुलसी डेरी उद्योग संचालनमा ल्याउन लागेको हो । दुग्धजन्य सामाग्रि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि दुग्ध प्रशोधन केन्द्र तुलसी डेरी उद्योग संचालन गर्न लागेको संस्थाका...